Archives des FET - Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA
Étiqueté : FET
Fihaonam-ben’ny AFAFI-FET eto Madagasikara : amin’ny 6, 7, 8 novambra no fotoana !
Hisy ny fihaonamben’ny AFAFI-FET amin’ny 6, 7, 8 novambra 2015 ka samia miomana isika rehetra. Araka ny fandaminana dia ny diosezin’Antananarivo no handray io fihaonana io. Eo am-pandaminana ny pitsopitsony ny Foibe nasiônaly amin’izao...
Papa Fransoa : ireo aretina 15 mikiky ny Fiangonana
Afafi ! Hizara fahasoavana sy fiadanana anie isika mandritra ity 2015 ity ! Ny 22 desambra lasa teo ny Papa Fransoa no namahavaha ireo aretina 15 tsapany fa mikiky ny Fiangonana. Nohamafisiny fa ny...
Mankalaza fety roa sosona ny Afafi-Fet !
Afafi ! Amin’ny fo feno haravoana no iarahabana antsika rehetra amin’izao fety roa sosona izao ! Hitoetra ao amintsika tokoa anie ny Hafalian’ny Evanjely ! 3 desambra, fetin’i Md Fransoa Xavier, mpiaro ny FET...
Efa tonga ny vavaka Fanolorana ny andro 2015
AFAFI ! Adiditsika AFAFI-FET ny manolotra ny andro. Koa manentana antsika rehetra mba samy hanao ary hampiely izany vavaka izany, ho fiombonantsika amin’ny Papa Ray Masina sy ireo Kristianina manerantany. 100 Ariary ny vidin’ny...
Misokatra ny taom-panabeazana 2014-2015 !
« Mba ho ao aminareo ny fifaliako » (Joany 15, 11) Afafi ! – FET ! Io teny Fanevan’ny Taon-jôbily iraisan’ny AFAFI-FET maneran-tany sady tenin’i Jesoa tamin’ny Mpianany io no entinay avy aty amin’ny...
Ry FET malala, aza atao tsirambina ny fivoriana !
Zava-dehibe ho an’ny FET ny fivoriana ka tsy tokony ho atao ambanin-javatra. Mbola maro amintsika anefa no tsy mahatsapa ny lanjan’io fivoriana io. Maro ireo fihetsika maneho ny tsy fahatakarantsika ny hasarobidin’ny fivoriana : – ...
100 taona ny Fivondronana eokaristikan’ny tanora
Loharano : Lakroan’i Madagasikara, 17 jolay 2014 Mankalaza ny faha 100 taona niorenany ankehitriny ny FET na ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora maneran-tany (1915 – 2015). Mandray anjara amin’izany i Madagasikara. Tany amin’ny diosezin’i Toamasina...
Fangatahana ampanaovin’ny Papa – Janoary 2020
JMJ 2021 : Hafatry ny Papa Fransoa ho an’ny tanora